Ànyị Kwesịrị Iji Ihe Oyiyi Efe Chineke? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malayalam Maltese Mapudungun Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mba, anyị ekwesịghị. Mgbe akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia na-ekwu banyere iwu Chineke nyere mba Izrel, ọ sịrị: “Ihe dị iche iche Baịbụl kwuru gosiri na ihe oyiyi abụghị ihe e ji efe Chineke ezi ofufe.” Lee ihe amaokwu Baịbụl ndị a kwuru:
“Emerela onwe gị ihe oyiyi a pịrị apị ma ọ bụ ọdịdị nke yiri ihe ọ bụla dị n’eluigwe ma ọ bụ nke dị n’elu ụwa ma ọ bụ nke dị na mmiri n’okpuru ụwa. Akpọrọla ha isiala, ekwekwala ka a rata gị ife ha ofufe, n’ihi na mụ onwe m bụ́ Jehova Chineke gị bụ Chineke nke chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa.” (Ọpụpụ 20:4, 5) Ebe ọ bụ na Chineke chọrọ “ofufe a na-ekewaghị ekewa,” obi agaghị adị ya mma ma anyị na-eto ma ọ bụ na-efe ihe oyiyi, foto, ihe osise, ma ọ bụ ihe a kpụrụ akpụ.
‘Agaghị m enye ihe oyiyi a pịrị apị otuto m.’ (Aịzaya 42:8) Chineke anaghị anabata ofufe mmadụ ji ihe oyiyi na-efe ya. Mgbe ụfọdụ ndị Izrel nwara iji ihe oyiyi nwa ehi fee Chineke, Chineke sịrị na ha mere “omume na-eweta mbibi.”—Ọpụpụ 32:7-9.
“Anyị ekwesịghị iche na Chineke yiri ọlaedo ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ nkume, dị ka ihe a kpụrụ akpụ site na nkà na nchepụta nke mmadụ.” (Ọrụ Ndịozi 17:29) Ndị ọgọ mmụọ na-eji ‘ihe a kpụrụ akpụ si na nkà na nchepụta nke mmadụ’ efe ofufe. Ma, Ndị Kraịst ekwesịghị ịna-eme otú ahụ. Ha kwesịrị ịna-eme ihe Baịbụl kwuru, ya bụ, “ịna-eje ije n’okwukwe, ọ bụghị n’ihe anya na-ahụ.”—2 Ndị Kọrịnt 5:7.
“Kpacharanụ anya ka unu ghara ikpere arụsị.” (1 Jọn 5:21) Ma iwu e nyere ụmụ Izrel ma nke e nyere Ndị Kraịst mere ka anyị mata na ozizi bụ́ na Chineke chọrọ ka e jiri ihe oyiyi na-efe ya ofufe bụ ozizi ụgha.